UDaniel Craig wagqiba kwelokuba abuyele kwinxaxheba kaJames Bond?
I nkwenkwezi News Star
Kubonakala sengathi ukukhwela kumdlali odlala uJacob Bond uphelile. Namhlanje kumaphephandaba kwakukho ulwazi lokuba abavelisi beBond abaziwayo banakho ukukholisa uDaniel Craig oneminyaka engama-49 ukuba aqhubeke nokusebenzisana nabo kunye neenkwenkwezi kwenye i-trilogy. Nangona kunjalo, ngoxa uDaniel ngokwakhe akazange akhankanye kule ngxaki.
U-Broccoli wakwazi ukukhohlisa uCraig
Njengoko inkcazo yangaphandle yaseMirror ibhala, umvelisi oqhelekileyo we-tepi malunga ne-MI6 uBrabara Broccoli ekwazi ukunyanzela uCraig ukuba asebenzisane. Kukho iindumiso zokuba iingxoxo ziqhubeka, kodwa isivumelwano sifikelelwe kwiingundoqo ezibalulekileyo. Ekuqaleni kwenkcazo kwakukho ulwazi uDaniel enqaba ukudlala kuMmeli we-Agent 007 ngenxa yokuba wayenobungozi obukhulu emadolweni, kwaye wayengenelisekanga ngolu hlobo lweetampu, kuba ngokokubaninzi wayekude kakhulu kwaye engabonakali. UBarbara wathembisa ukuba iifilimu ezilandelayo ziza kuba ziyinyani, kodwa umbhali uJohn Logan, obhala incwadi yecandelo lamathathu angaphambili, wenqaba ukutshintsha.
UDaniel Craig njenge-Agent 007
Ukongezelela, kwaziwa ukuba umsebenzi olandelayo kwi-trilogy iya kutsala umculi u-Adele, obhala i-soundtrack kwi-tape "007: I-Coordinates" Skyfoll "kwaye ifunyenwe ngenxa ye-Oscar. Ngokumalunga nefowuni, ziya kuqala ngo-2018. Ukuba ukholelwa kwingcaciso engaphakathi, uCraig uya kubandakanyeka kwinkqubo eqhubekayo yokuhlawulekayo malunga neenyanga ezintandathu kwifilimu enye.
UDaniel Craig kwaye ukhulelwe uRaily Weiss naseNew York: iifoto ezintsha zabatshatileyo
URain Weiss upapashwe emva kokumenyezelwa kokukhulelwa
Iifoto ezingama-33 zabantu abadumileyo ukusuka kuma-90, okungcono ukulibala
UDaniel wagqiba ekubeni angayinqumle imivini yakhe
Ngokukhawuleza ukuba iindaba eziphathelele ukuqokwa kukaCarig kwendima kaYakobi Bond zavela kwi-intanethi, abalandeli bawakhumbula ngokukhawuleza amazwi kaDaniyeli ukuba wayeya kunqumla imivilini yakhe kwakhona ukuba aphinde azame ngomfanekiso we-Agent 007. Kubonakala ukuba, uBarbara wayenengxabano ezintle zokwenza ukukhohlisa uCraig ecaleni lakhe. Amaninzi amaninzi anomdla kwixabiso lemali leyo umdlali oza kuzuza ngokudlala uJames Bond, kodwa le ngcaciso ayifumaneki. Ekuqaleni kwaxelwa ukuba uDaniel, xa athe watyikityina isivumelwano se-trilogy, uya kufumana i-$ 100 yezigidi.
Khumbula, emva kokuba umdlali oneminyaka engama-49 ubudala engavumi ukuba avele kwi-bond bond, amajelo asasazwa iindaba ngeendlela abadlali abavavanywa ngayo indima ye-MI6. Omnye wabambisana nabo yayinguTom Hiddleston, kodwa ngokutsho koBroccoli umdlali wayengengowomntu. U-Idris Elbe, uJames Norton, uMichael Fassbender kunye nabanye abaninzi banqatshelwe.
UDaniel Craig ubuyela kwiBond
UHanon uneminyaka engama-25 ubudala: abalandeli baxabisa i-clip entsha
UBritney Spears kunye noKevin Federline baphikisana ngokumalunga nomlinganiselo we-alimony
Ingubo ephuzi kaRihanna
Yintoni uNatalia Oreiro akwenzayo ngoku?
Ola noJames Jordan - ikhefu elinomdla e Dubai
Umtshini uStella McCartney wasayina isivumelwano kunye nentombi kaMadonna uLourdes Leon
UChloe Sevigny akakwazanga "ukupakisha" umgca wokugqoka
UKylie Minogue wanikezelwa ibhaso elikhethekileyo nguMbutho waseBrithani-Australia
U-Idris Elba noJordan Dunn badibana
UWinona Ryder uvikela uJohnny Depp, obuyele eUnited States
Kara Delevin kunye nentombi yakhe
UDavid noVictoria Beckham - ibali lokuthanda
Miley Cyrus noStella Maxwell
U-Michelle Williams ubonakala ngomhla olwasemzini
Indlela yokuyithandabuza ukungathandabuzeki - iingcebiso zengqondo yengqondo
Izilwanyana ze-LED ezifakela ngokulawula okude
Indlela yokwenza iinwele zibe zipholile kwaye zikhanyise?
Ukuvuvukala emathunjini amancinci - iimpawu, unyango
Iimfesi zeempesheni zowesifazane 2015
Ukuvuvukala kwama-lymph nodes - izizathu ezinokwenzeka kunye nokunyanga okungcono
Ungayiphuza njani ioli yefowuni ukuze unciphise umzimba?
I-Flop ipake ngamakhowe
Iindlela ezili-15 zokuthi "uphume" ubomi bakho
Umthi weli dola utyhubela njani?
Iingubo zepaki zasebusika zabasetyhini
Iimvumba zasehlobo zenzetyhinikazi
Umbala weLilac kwingqondo
Izinto ezili-15 ezinokukunceda uzive ungcono
Semifredo kunye ne-mascarpone
I-Phyto Slimming Coffee